Sargaalad katirsaneyd Milatariga Soomaaliya iyo Seygeeda oo ku dhintay Qaraxii Muqdisho – Banaadir weyne
Sargaalad katirsaneyd Milatariga Soomaaliya iyo Seygeeda oo ku dhintay Qaraxii Muqdisho
Qaraxii maanta ka dhacay barkoontarool oo Ciidanka Nabad Sugida ku leeyihiin agagaarka Xabsigii hore ee Godka Jilacoow ayaa waxaa ka dhashay khsaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray saraakiil, ciidan iyo dad shacab ah.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in dadka qaraxa ku dhintay ay ku jirto Sargaalad katirsaneyd Ciidanka Milatariga Soomaaliya oo lagu magaacaabo Faay Cali Raage, waxaana wararku sheegayaan in sargaalada uu la dhintay seygeeda oo isna askari ahaa.
Qaraxa waxaa sidoo kale ku dhintay askar ilaalo u aheyd sargaalada oo la socday gaari Cabdi Bille ah, waxaana sargaalada geeriyootay iyo ciidanka la socday ka howlgalo jireen Gobolada Shabeelooyinka.
Al Shabaab ayaa sheegtay in qaraxan ku dileen saraakiil katirsan ciidanka dowlada iyo sidoo kale ciidamo badan, waxa ay sidoo kale Al Shabaab sheegeen in Xildhibaano ku dhaawacmeen qaraxan.
Qaraxan ayaa noqonaya kii ugu khasaaraha badnaa ee bishan Ramadaan ka dhaca magaalada Muqdisho, waxaana qaraxan uu dhacayaa xili amaanka magaalada si weyn loo adkeeyay lana xiray qaar badan oo wadooyinka magaalada. – All Banaadir News